प्रधानमन्त्री, पूर्वराजा, कांग्रेस महामन्त्री सबै विदेशमा, ठूलाबडा किन बस्दैनन् नेपालमा ?
२७ श्रावण २०७६, सोमबार १०:४७
काठमाडौं । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय डा.शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालालगायत सबै विदेशमा छन् ।प्रधानमन्त्री ओली १० दिनदेखि सिंगापुरमा छन् । उनी आज (सोमबार) स्वदेश फर्कने बताइएको छ । पूर्वराजा शाह परिवारसहित थाइल्यान्डको बैंककमा छन् । उनी शुक्रबार मात्र त्यसतर्फ गएका हुन् । पत्नी कोमल, बुहारी हिमानी शाह र नातिनीसहित उनी भदौको तेस्रो सातासम्म बैंककमा रहनेछन् ।
१० दिनअघि मात्रै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारसहित दुबई पुगेका थिए । पत्नी सीता, दुई छोरी रेणु र गंगा दाहाललाई लिएर दुबई गएका उनी पाँच दिन बसेर फर्केका हुन् ।यतिबेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला थाइल्यान्डमा छन् । उनी थाइल्यान्ड जानुको प्रयोजनबारे कांग्रेसले केही खुलाएको छैन् । पूर्वराजा शाह पनि उतै रहेकाले थाइल्यान्डमा केही खिचडी त पाक्दै छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
पछिल्लो समय हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापना हुनुपर्ने अडानमा शशांक देखिएका छन् । त्यही भएर पूर्वराजा र कोइरालाबीच भेटवार्ता हुन सक्ने बताइएको छ । कांग्रेस महामन्त्री खड्का र केन्द्रीय सदस्य डा.कोइराला भने कतार, दुबईतिरको भ्रमणमा छन् । उनीहरू नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका हुन् ।
‘जम्मू कश्मीर मुद्दालाई नियालिरहेका छौं’, सरकारले भन्यो, ‘नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ’ भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ’
हिरासतबाट रवि लामिछानेले जारी गरे आफ्ना समर्थकलाई यस्तो सन्देश
रवि लामिछानेलाई भेट्न कांग्रेस नेता जगदीश्वरनरसिंह केसी चितवन जाँदै, कांग्रेसका क–कसले भेटे रविलाई ?
ड्युटीमा रहेका प्रहरी नायब निरीक्षकमाथि पूर्वयुवराज पारसले गरे हमला (भिडियोसहित)
यस वर्षको मदन पुरस्कार योगेश राजको कृति ‘रणहार’लाई, वैरागी काइँलाले पाए ‘जगदम्बा श्री’ पुरस्कार